KwaVW bethule i-Arteon entsha | Isolezwe
KwaVW bethule i-Arteon entsha
ezezimoto / 13 May 2018, 11:36am / MCEBO MPUNGOSE
KULELI sonto inkampani iVolkswagen yethule uhlobo olusha lwemoto emndenini wayo, i-Arteon. Ngaphambi kokuthi yethulwe izinkulumo zokuthi izovala isikhala se-CC bese zivele ziqalile, futhi kulula ukubona isizathu salokho. Njengoba sekuphelile ukukhiqizwa kwe-CC, abakwaVW bebedinga ukuthi babeke umhlahlandlela ngegxathu abafuna ukulithatha esigabeni sezimoto zohlobo lwe-sedan ezinamandla.
Ngesikhathi yethulwa bayichaze njengemoto ezele ukuzogcina abantu abashayela izimoto zabo kulo mndeni, kwazise izimoto zabo ezidayisa ubuthaphuthaphu iPolo nePolo Vivo, zishayelwa kakhulu yintsha.
Ngaphezu kwalokho lolu hlobo lwezimoto, ikakhulukazi kubantu boHlanga uma kukhulunywa ngazo kuvame ukuthi kuvele ukuthi zishayelwa amasoka nabantu abazifelayo ngobumnandi. Ukuba khona kwe-Arteon sekuzochaza ukuthi abashayeli balezi zimoto ezincane asebefuna ukudlulela kwezinkudlwana ezingamumatha umndeni futhi zikwenze ubukeke uwumuntu osedlulile esigabeni sama ‘Vrrr Paa’ sebezokwazi ukuhlala emndenini wakwa-VW. Phambilini iCC nePassat akuzona izimoto abaningi asebekhulile abebengalangazelela ukuzithenga, kwazise izinkampani ezincintisana ne-VW kulolu hlobo lwezimoto bezigadla ngezimoto ezinzima njenge-Audi A5, BMW 3 Series neMercedes-Benz C-Class.
Isizathu esenza ngikholwe ukuthi lemoto izoba nethuba lokuthi yenze kahle, ngaphandle kobuhle bayo, ukuthi inamandla angathakaselwa umuntu ozifelayo ngokushayela izimoto ezinesivinini futhi ebambelelayo emakhoneni acijile. Indlela eyakhiwe ngayo yenziwe ukuthi ibukeke njengemoto ye-sport kodwa enesizotha nokuvuleka kwemoto ethwala abantu ngaphakathi. Akusikhala kuyafiwa ngaphakathi indlela evuleke ngayo, kanti nasebhuthini anganela cishe ama-suit case amathathu nezikhwama ezincane indlela enkulu ngayo. Ngenkathi siyivivinya eZwartkops Raceway ePitoli ngemuva kokwethulwa kwayo, kucacile ukuthi uma isuka ngesivinini iduma kamnandi futhi uyishayela ngezindlela ezahlukene okungaba uSport noma kuComfort.
Ubuchwepheshe obungichaze kakhulu ukuthi uma uyishayela nonkosikazi nje, niyakwazi ukuyihlela ngendlela enithanda ngayo ngokuhlukana kwenu bese izwa ngokhiye ukuthi ubani oyishayelayo, ihlele ngendlela ayeyenze ngayo ukuma kwezihlalo nokunye esingabala kukho i-suspension okwaziyo ukuzishintshela yona.
Emakhoneni amathoshi ayo eLED ajika kuqala ukuze akukhanyisele kanti kwezokuphepha i-Arteon inobuchwepheshe obuqapha ukusondela kwezinye emzimbeni wonke wemoto, hhayi ngemuva nangaphambili kuphela.
INavigation System yayo ilula njengoba ibonakala kwi-screen sayo, ubukhulu baso obucishe bulingane neTablet. Ukuvuleka kwebhuthi kubukeka kuyinto encane kodwa abakhiqizi bale moto baqinisekisile ukuthi umnikazi wayo uyakwazi ukuyivula ngaphandle kokuthinta ukhiye uma isikhiye sisemzimbeni kuye. Lokhu kwenza kube lula uma uphethe umthwalo omningi ezandleni noma uphuthuma.
Ezinhlobweni ezizodayiswa esicongweni kukhona i2.0 TSI R Line 4Motion DSG ekhiqiza amandla angu-206 kW, i-2.0 TDI R-Line DSG ekhiqiza * -130kW ne-2.0 TDI Elegance DSG enamandla afanayo.
Noma lezi zimoto ziqala kuR599 000, ehamba phambili kuzo ibiza uR699 000 kuphela, okuyibhonasi uma ubuka nokuthi zonke ziza ziphelele ngobuchwepheshe bangaphakathi nangaphandle.
I-2.0 TSI R-Line kuyithatha imizuzwana engu-5.6 kuphela ukuthi isuke ku 0 iye ku-100 km/* . Isivinini esincomekayo kakhulu lesi uma ubuka usayizi wemoto kodwa esikuncome kakhulu ngayo indlela eshayeleka ngayo emgwaqweni ezimweni ezijwayelekile.
Ngasemasondweni, usayizi uqala ku 18 inch kodwa abathenga * -19 inch yibona abazohlumula ngesondo eliwu-19 inch eliyisipele.
Ngesikhathi senza inhlolovo emfishane ngale moto ezinkundleni zokuxhumana, siqaphile ukuthi abantu abaningi bayamukela ngazo zombili i-Arteon. Kodwa ke akukho soka elingenasici. Okucacile ngesikhathi kuba nemibuzo ngokuqala kwayo kuR599 000.
Abaningi babe nesikhalo sokuthi noma inakho konke kodwa ngeke iphumelele kuleli ngenxa yokubiza kwayo inani elisesigabeni samaSUV aphambili futhi athengwayo kakhulu. Nokho eNingizimu Afrika sisekhona isikhala salezi zimoto futhi nge-Arteon iVW isisinikeze enye imoto ezoqinisa ukuncintisana kwazo.
Zonke ziza neMaintainence Plan yeminyaka emihlanu noma * -90 000 km, i-warranty yeminyaka emithathu noma * -120 000 km ne- anti-corrosion warranty yeminyaka engu-12.